PTUZ Yoronga Kuratidzira Zvichitevera Kukwidzwa kweMari dzeBvunzo
Kukadzi 19, 2020
PTUZ Teachers Strike
Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, PTUZ, rinoti rakasvitsa gwaro kumapurisa neMuvhuro, richiazivisa nezvehurongwa hwaro hwekufora richienda kuparamende kunosiya gwaro renyunyuto, pamusoro pekukwidzwa zvakanyanya kwemari dzebvunzo dze “Ordinary” ne “Advanced” Level gore rino.
Munyori mukuru wePTUZ, VaRaymond Majongwe, vanoti vakazivisa mapurisa kuti vachafora nemusi wa 27 Kukadzi, senzira yekuti paramende ipindire, sezvo vabereki vakawanda, kusanganisira varairidzi vane vana vachanyora bvunzo idzi, vasingakwanise kubhadhara mari dzabva kudiwa idzi.
Boka rinoona nezvebvunzo, reZimbabwe School Examinations Council, Zimsec, rakazivisa kuti mari dzebvunzo dzeOrdinary Level dzakwira kubva pamadhora gumi nemashanu, kuenda pamadhora zana nemakumi mapfumbamwe pagwaro rimwe chete, kuchitiwo bvunzo dze Advanced Level dzakakwidzwawo kubva pamadhora makumi maviri nematanhatu, kuenda pamadhora mazana matatu nemakumi mashanu nerimwe, pagwaro roga roga.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumapurisa kana atambira gwaro rePTUZ iri.
Pasi pemitemo yenyika, vanhu kana masangano anoda kuratidzira anosungirwa kutanga azivisa mapurisa kuitira kuti mapurisa agadzirire kuchengetedza runyarare panguva iyo vanhu vanenge vachiratidzira.
Vamwe Vemabhizimusi, Zvikoro zvePamusoro, Voti Zvirango Zviri Kuvakanganisa
Mutungamiri weAmerica, VaDonald Trump, Vanovhota Pamberi peSarudzo
Vechidiki veZanu PF Vanoshoropodza Voice of America neDzimwe Nhepfenyuro dzeKunze
Vabereki Vogadzirira Kuvhurwa kweZvikoro Varairidzi Vachiti Havasi Kuzodzokera kuMabasa